www.camaloow.com - News: Cabdiraxmaan Faroole oo ku fashilmay Musharaxnimadiisa kana tanaasulayâ€¦.........................
December 10 2018 03:21:36
Cabdiraxmaan Faroole oo ku fashilmay Musharaxnimadiisa kana tanaasulayâ€¦.........................
<?php </a> Madaxweynihii hore ee Puntland, C/raxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud (Faroole), ayaa si adag u beeniyay in uu u tanaasulay Raâ€™iisal Wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke.
Waxaa Isniintii suuqa soo galay in C/raxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud uu ka tanaasulay murashaxtinimadiisa jegada madaxtinimada ee dalka, ka dib kulan Magaalada Garoowe uu kula qaatay Raâ€™iisal Wasaare Sharmaarke, Madaxweynaha Puntland, C/weli Maxamed Cali Gaas iyo Xildhibaan C/risaaq Cismaan Xasan (Jurille).
Madaxweynihii hore ee Puntland, ayaa kulankaasi ku sheegay mid wada tashi ah, maadaama la soo gaba gabeeyay doorashada Xildhibaanada Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Somaliya.
C/raxmaan Faroole oo ka gaabsaday in uu ka hadlo waxyaabihii ay kaga wada hadleen kulankaasi, ayaa hadana si adag u beeniyay in uu u tanaasulay Raâ€™iisal Wasaaraha Somaliya, si deegaanada Puntland uu kaga yimaado murashax qura.
Faroole oo Talaadadii Saxaafadda kula hadlaayay Magaalada Garoowe, ayaa waxaa uu meesha ka saaray in kulankaasi ay kaga hadleen waxyaabo u gaar ah, aan ka ahayn in ay uga wada hadleen talada guud, sida uu yiri.
Raâ€™iisal Wasaare Sharmaarke oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa Magaalada Garoowe, ayaa waxaa uu ka wadaa ololihiisa uu ku doonayo in uu kula wareego hogaaminta dalka.
· hiiraan on December 15 2016 · 0 Comments · 75865 Reads ·
Render time: 0.02 seconds 28,900,163 unique visits